Umatshini wokusika oscilic / oMatshini wokuSika oMatshini weTshayina - china oscillating amalaphu / owomatshini wokusika wesikhumba abavelisi, abaxhasi
I-CNC i-Knill Cutting Machine xa ithengiswa ngo-2021
1625 ngeenxa zonke imela ukusika umatshini kunye auto lokondla worktable, mayixhotyiswe iimela kabini-enye Ukuhlukunyezwa kunye enye ukusika (iimilo ezahlukeneyo). Njengokutya okuzenzekelayo okusebenzayo, kungasindisa iindleko ezininzi zabasebenzi. Ngaphandle koko, ixhotyiswe ngenkqubo yokulungisa ukuphambuka ngokuzenzekelayo, inokunceda ukugcina ukusebenza ngokukuko okuphezulu, ukuphucula ukusebenza ngokukuko. Ukusetyenziswa ngokubanzi kwiisofa, ikhethini, ilaphu letafile njl.
Indlela yokusika imela ilungile ukugcina ibhalansi phakathi kongcoliseko lukhululekile, akukho ndawo yokusebenza enukayo, ekhulisa imveliso, ukonga iindleko zabasebenzi kunye neendleko ezifanelekileyo. Ngomsebenzi wokusika ojikelezayo oguqukayo, ubhetyebhetye obuphezulu, ukusetyenziswa kwezinto eziphezulu kunye nexabiso elifanelekileyo, isisombululo sokusika imela ukuseta ngokukhululekileyo ukusuka ekuqhubekeni nasekuveliseni imveliso emfutshane.
I-CNC yokuTyibilika kweeNtsimbi eziThengisa ukuThengisa
Izithuthi zangaphakathi zeCNC eziCutha ukuSika iiNkqubo zokuThengisa
I-CNC Gasket Cutting Machine ene-Pneumatic Oscillating Knife Cutter iyathengiswa